Soomaaliya, 01 March 2019 page pageno
Dilal dhowr ah oo ka dhacay Muqdisho
Magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay dad door ah oo shacab ah kuwaasi oo ay ku jireen dad nadiifinayey waddooyinka degaanka Lafoole.
Maxaa laga qaban karaa kufsiga dhulalka Soomaalida?
Dilka habeen hore loo gaystay gabadh 12 sano jir ah magaalada Gaalkacayo ayaa si weyn uga argagixiyey dadka Soomaalida.
Gaalkacyo: Gabar yar oo la fara-xumeeyey kadibna la dilay
Meydka gabar yar oo ahayd 12 jir oo la la’aa ilaa shalay ayaa saaka laga helay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dad ka shaqeynayey nadaafadda oo lagu laayey Sh/Hoose
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellada Hoose ayaa idaacadda VOA u sheegay in sagaal qof oo nadiifinayey waddo lagu dilay degaanka Lafoole ee gobolkaas.
Somalia: Maraykanka oo Duqeymo Geystay
Maraykanku waxa uu sheegay in laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabab lagu dilay weerarrada, isla markaana lagu burburiyey baro kontorool iyo adeegyo kale oo Al-Shabab ay canshuuraha ku qaataan.
Shirka Wadamada Carabta iyo Yurub oo ay Soomaaliya ka Qaybgaleyso
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Dowlad Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa tegey magaalda Sherma Sheekh ee dalka Masar, halkaas oo ay uga qeybgeli doonaan shir ay yeelanayaan wadamada Carabta iyo Yurub.
Xildhibaan Boqorre oo Muqdisho lagu Dilay
Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre ayaa kooxo hubeysani ku dileen degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, xilli uu booqanayey guri uu isagu leeyahay oo laga dhisayey degmadaas Kaaraan
Wareysi: Kulankii M. Biixi iyo Abiy Ahmed
Wadahadalkadaas ayaa waxaa bogaadisay dowladda Federalka ee Soomaaliya, oo sheegtay in Muuse Biixi uu aqbalay inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda Federalka ee Soomaaliya.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qubanayaal kala duwan oo siyaasadda Somalia ku saabsan, iyada oo qodobada toddobaadkan uu ka mid yahay booqashadii madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi ee dalka Ethiopia.
Shabaab iyo Daacish oo ku dagaallamay gobolka Bari
Warka ka imaanaya deegaanka Dhaadaar ee gobolka Bari ayaa sheegaya in saaka waaberigii uu dagaal ku dhex maray tuulada Afgaraar maleeshiyaadka Daacish iyo Al-Shabaab.